“Liverpool waxay awoodaa inay dib u soo celiso xili ciyaareedkii taariikhiga ahaa ee kooxda Arsenal” – Unai Emery – Gool FM
“Liverpool waxay awoodaa inay dib u soo celiso xili ciyaareedkii taariikhiga ahaa ee kooxda Arsenal” – Unai Emery
(Premier League) 27 Dis 2018. Macalinka reer Spain ee Unai Emery ayaa aaminsan in kooxda haatan uu hogaamiyo Jurgen Klopp ee Liverpool ay dib u soo celin karto guushii taariikhiga ahayd ay Arsenal ka sameysay horyaalka Premier League.
Kooxda reer London ee Arsenal ayaa marti ugu noqon doonto dhigeeda Liverpool garoonka Anfield Sabtida soo aadan, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 20-aad horyaalka Premier League ee xili ciyaareedkan 2018/20019.
Unai Emery oo wax laga weydiiyay in ay suuragal noqon karto in Liverpool ay qaadato sida xili ciyaareedkii taariikhiga ahaa kooxda Gunners ee 2003/2004, kadib markii ay ku guuleysteen horyaalka Premier League iyagoo aanan dhadhaminin wax guuldaro ah, wuxuuna macalinka reer Spain yiri:
“Waxay ilaa iyo haatan sameenayaan sidaas oo kale, waxaana suuragal noqon karta inay sii wadaan ilaa iyo dhamaadka xili ciyaareedka”.
“Waxaan la ciyaaray Liverpool seddex sanno ka hor markii aan la joogay Sevilla finalkii UEFA Europa League, Balse waxaan haatan qadarinayaa awooda iyo hormarka weyn ee safka Reds”.
“Liverpool ayaa sameysay horumar muddo seddex sano ah, laakiin waxay lumiyeen ku guuleysiga horyaalka Premier League, Champions League iyo UEFA Europa League”.
“Waxaan ku jirnaa waqti aan u baahanahay inaan guul gaarno isla markaana aan horumar sameyno, balse waxaan u baahanahay waqti”.
“Waxaan u baahannahay inaan sii wadno shaqadan, si aan u hagaajino howlaha qaar ee kooxda, lakiin haatan waxaan ku faraxsanahay inaan helno 38 dhibcood inta lagu jiro qeybta hore ee xilli ciyaareedka, balse waxaan u baahanahay wax intaas kasii badan”.
“Waxaan u baahanahay inaan horumarino nafteena, sababtoo ah waxaan dhalinay goolal badan, lakiin waxaan u baahanahay sidoo kale inaan horumarinno qeybta dambe ee difaaca”.
Mar Wuxuu ahaa mid ka mid ah Xiddigaha ugu Mushaarka badan Adduunka iminkana waa SHIID OO SHILIN ma heysto....(Bal AQRISO tan qabsatay Asamoah Gyan)